Ibdidda seenaa Kaalifoorniyaa keessaa isa hamaa ta’eef qabeenyaa hedduu mancaase kan Los Angeles Kaaba gama dhiyaa keessa dhaamsuu irratti fuuleffatanii kan jiran ta’uu angawoonni kutaa ittisa ibiddaa beeksisanii jiran.
Ibiddi ka’e kun dachii square km 930 kan gube ennaa ta’u erga torban darbe ka’ee qabee konyaa Santa Barbara keessaa biilsaalee 800 ol mancaasee jira.
Angawoonni akka jedhanitti bobaan ibiddaa kun dhibba irraa harki 10 qofati dhaamuu kan danda’e ennaa ta’u, hojjettoonni ittisa ibiddaa samii irraan bishaan biifuun dhaamsuuf yaalii godhaniin milkaa’ina hanga tokko argatanis ibidda hamaa qilleensa cimaa jiruun babal’achuu danda’u ta’uun ibsameera.
Hoogganaan kutaa ittisa ibiddaa Kaalifoorniyaa Tim Chavez akka ibsanitti naannoo Kaaba gama dhiyaa kan km 160 ta’u ibidda sana ittisuuf bakka akkaan rakkisaa dha jedhan.
Ibidda kana dhaamsuuf hojjettoonni kutaa ittisa ibiddaa 5,700tu irratti hirmaatan.
Balaan ibiddaa kun namoonni kuma 200 ol ta’an qe’ee isaanii irraa akka baqatan dirqisiise.
Prezidaant Doonaald Traamp balaa kana ilaalchisee deggersa gochuuf deebii kennaniin kaalifoorniyaa dhaaf labsii yeroo hatattamaa labsanii jiran. Kunis jaarmoliin federaalaa tattaaffii baraarsaa akka qindeessaniif daandii saaqa.